Astaanta Askiliibiyos “The Rode of Asclepius” - Land Of Punt
Waxaa iyana jirta “The Rod of Asclepius” oo lagayaqaanay Greega wakhtiyadii hore, waxaan loo aqoonsanaa astaan cafimaad. Waxaa jirijiray nin sixiroole ah oo dadka dabiiba oo sheganjiray inuu yahay wadaad karaamaysan oo dadka daweeya wuxuuna lahaa masas badan oo aan ka ag dhamaan jirin. Ninkan wadaadka sheegtay ayaa masaska dadka ku daweynjiray oo wuxuu odhanjiray ama ku amrijiray intaanu hawshiisa galin in marka hore neef xoola ah oo loo sadqeeyo ilaah xanuunka “NINGISHZIDA” keena. Marka neefka la gowraco quraafadna lagu dul akhriyo ayuu masaska amri jiray oo odhan jiray xanuunka leefa shikhsiyaa uyimi ee dawada usoo doontay.
Tarikhda kusoo aroortay wadaadka Askiliibiyos “The Rode Asclepius” waxay inoo sheegay in markaa masku leefo qofka inuu kaboodi jiray oo ku buskan jiray. Greegi wakhtigaa noola waxay aaminsanaayen inay ku buskonayaan leefida maska. Astaanta “The Rod of Asclepius” waxaa adeegsada hayadaha caafimaadka “medicine industry” khasatan farmasiiyada ayaa astaan ka dhigta oo isticmaala intabadan waxaad wajahada hore ee farmasiiyada ku arkay koob/bakeeri mas dultaagan oo dultaagan.
Intabadan waxaa laysku khaldaa usha masaska ee ilaah Hermes “The caduceus” iyo wadaadka Askiliibiyos “The Rod of Asclepius” oo takhuusus ku haysta dawooyinka. Hadiiba aad kusoo biirtay xeerta ka barakaysata khuraafadka baabiloon iyo giriiga inaga yimi inaad saxdid sanabka aad xusay waa muhiim. Inlaysku khaldo calaamada iyo micnaha ku jiraa waxaa keenaya aqoonta la’aanta ka haysata cilmiga fahamka “Symbolism”. Waxaynu kula talinaynaa farmasiiyada wadanka gudihiisa ka hawlgala iyo guud ahaan wadamada muslimiinta inay iska hubsadaan astaamaha noocan oo kale ee aqiidadooda wax yeelikara.
astaanta Askilliibiyos astaanta farmasiiga dawooyin farmasi MAS The Rode of Asclepius